American Airlines Email Revue - Kuwana Sarudzo | Martech Zone
American Airlines Email Revue - Kuwana Sarudzo
NeChishanu, Gunyana 21, 2007 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Ini ndangogamuchira email kubva kuAmerican Airlines uko kwavanoda kuti ini ndipinde mune imwe yekuwedzera email kutaurirana. Mukudzoka, ini ndinopinda mumakwikwi uko ivo vari kupa irwo rwemahara rwendo pamwe nekuwana mamwe mamaira kana tikiti rakaderedzwa.
Shamwari yangu yakanaka Chris Baggott aigara achigadzira muenzaniso weAirlines kana zvasvika pakupa zvakanangwa kune vateereri. Ndege dzinoziva kero yepamba pedu, yendege yendege, mafambiro edu… asi ivo vanotitumira maspecials enzendo kuenda / kubva kune mamwe maguta kunze kwekufamba kwedu, nezvimwewo zvinosekesa… pane kutipa ruzivo rwatiri kutsvaga, ivo vanotiparadzanisa isu uyezve isu hatitomboverenga maemail avanotumira.
Nhasi ndagamuchira email kubva kuAmerican uye graphic yakabata ziso rangu.
Pakudzvanya kuburikidza, ndakaona kuti maAmerican akaita basa rakakura pane izvi. Iyi yekubatanidza yekudzvanya yaive ne 'kiyi' iyo yainyatso kuudza saiti inogamuchira kuti ini ndaive ani. Nekudaro, pandakagadzirisa zvandinoda (-kudzvanya-kamwe, zvakapusa, kupenya), mhedzisiro yacho yaikurumidza. Ini ndaisafanirwa kuisa mune yekuwedzera ruzivo ivo vatova navo uye havana kuyedza kuwedzera-pane yekunze kushambadzira kana kushambadzira kwezvimwe zvigadzirwa nemasevhisi.
Uyu mushandirapamwe wakanaka kwazvo wekutsvaga - ndinoda kuziva kuti uchabudirira sei. Yaive iine zvese zvinhu zvekubudirira:
Yakabata pfungwa dzako.
Yakanga iine kudaidzwa kwekuita.
Iyo mameseji yainyatso kuoneka.
Maitiro ekushandura aive nyore.
Zvakaitwa! Mubvunzo chaiwo, chokwadika, ndeyekuti kana vachigona kuchengeta maemail avo achienderana neni. Kana vasingakwanise, ini ndinozozvinyora uye izvi zvese zvinenge zvaparara.
Makorokoto kuna Jim Cota uye Chikwata kuRareBird!
Technical Kushambadzira neOxymoron
Ndakagamuchira mashoma eaya kubva kwavari asi zvakare ndawana iya yaunotsanangura. Iyo ReVue yekugadzira ndeye hokie mumaonero angu, asi zano racho riri chairo pa…
Sep 21, 2007 na12: 45 PM
Ini ndinobvuma Jonathan - asi yaive isina hunhu kune imwe yemaimeri avo iyo yakandibata. Ini handina chokwadi chekuti yaive nemaune chikamu chehurongwa - asi zvakashanda!